Ungayandisa kanjani inzuzo nge-software yamahhala | Kusuka kuLinux
Ngisebenzisa isoftware yamahhala nsuku zonke, ngikholelwa ekusebenzeni kwayo futhi ngaphezu kwakho konke ngicabanga ukuthi iyindlela yokuhlanganisa abantu abaningi lapho ukufinyelela olwazini kungabekiwe, lapho umnikelo womphakathi usenza sikhule ngokushesha futhi lapho kungakhathalekile amakhono ethu siza ukudala izinto ezingcono.
Ngaqala ngohlobo lochungechunge lwe Ungalikhulisa kanjani ibhizinisi lethu ngesoftware yamahhala, kuyo yathi izinhloso eziyinhloko zebhizinisi kufanele kube khulisa inzuzo, dala umkhiqizo, gcina amakhasimende ethu futhi sinciphise izindleko noma ukulahlekelwa, inhloso yethu ukuqhubeka nokuhlinzeka ngolwazi ukuze lezi zinhloso zifezekiswe ngendlela esheshayo ngama-SME nezinkampani ezinkulu.
Izinkampani eziningi zikholelwa ukuthi okuwukuphela kwendlela yokwengeza inzuzo ukukhuphula inani lokuthengisa, yize kuyiqiniso ukuthi umthombo omkhulu wemali engenayo ethe xaxa ukuthengisa okuningi, lokhu akusho ukuthi kuthinta inzuzo ephezulu, ngenxa yohlaka lwezindleko Ezimweni eziningi ayithandeki noma izimo namakhono okukhiqiza ancipha njengoba umkhiqizo wenziwa mkhulu. Akunandaba ukuthi kunjalo yini, siyaqiniseka ukuthi ukwanda kwenzuzo kuthonywa ngqo amandla ethu okuthengisa, amandla ethu okuphathwa kwempahla namandla ethu okuvimba umthengi wokugcina ukuthi abuyise umkhiqizo wethu, okusobala ukuthi kuhlotshaniswa nokwehla kokwesekwa. , ukulawulwa kwangemva kokuthengiswa noma ukumane ukwandise ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza.
Inqubo yokwandisa inzuzo
Inqubo yokwengeza inzuzo isuselwe kakhulu ekutholeni amathuba okunciphisa izindleko ezihambisana nenqubo yokukhiqiza, yokumaketha nokusabalalisa umkhiqizo, okumele ihambisane nokulawulwa okuhle kakhulu kwekhwalithi yomkhiqizo namasu afanele wokwenza ukuguqulwa okusha kokuthengisa ngezingxoxo lapho amamaki athandeka kakhulu.
Isoftware yamahhala ingathonya ngqo inqubo yokwengeza inzuzo ngoba inamathuluzi avumela ukwenza ngcono ukulawulwa kokwakhiwa, ukumakethwa nokusatshalaliswa kwemikhiqizo, ngendlela efanayo, kunenqwaba yesoftware yamahhala eyenzelwe ukumaketha kanye nokulawulwa kokuthengisa okunomthelela ekwandeni kokuguqulwa, ngokufanayo ngenxa yamathuluzi ahlukahlukene okuphatha amaklayenti nabasebenzi esingakwazi ukuthuthukisa izinsizakalo zethu.
Inhlanganisela elungile yawo wonke la mathuluzi isiholela ekuphakameni kwezobuchwepheshe okungenzeka ukuthi kusenze sincintisane kangcono, kusinikeze amanani entengo angcono okukhiqiza futhi kunikeze amakhasimende ethu izindlela ezilula zokuthola imikhiqizo yethu ngeziqinisekiso ezingcono zokwaneliseka.
Indlela elula yokwengeza inzuzo nge-software yamahhala ukukhomba amathuluzi avumela ukwenza ngcono izinqubo ezibalwe ngenhla, ngokujwayelekile amathuluzi esaziyo ukuthi angakusiza kulo msebenzi obalulekile yile:
Ama-CRM ahlukahlukene akhethekile achazwe ngokuningiliziwe ku-athikili phezulu amathuluzi we-CRM womthombo ovulekile ophezulu.
Umthombo ovulekile we-ERP ovumela ukuphathwa kwezinqubo zokukhiqiza zenkampani, ezingasetshenziswa kahle kungasiza ekongeni izindleko futhi zilinganise izinqubo zokukhiqiza, ezibandakanya kakhulu amamojula we-crm nawokuthengisa ngemuva. Phakathi kwazo singabala i-invoyisiScript, Odoo, Idempiere, Adempiere, LibertyaERP, webERP, I-ERPNext, I-MixERP phakathi kwabanye.
Amathuluzi amahle kakhulu E-commerce njengoba Magento, PrestaShop, osCommerce, OpenCart, I-Spree Commerce phakathi kokunye, lokho kusivumela ukuthi sihehe amakhasimende amasha futhi senze ukuthengisa ngesikhathi esincane ngezindleko zokusebenza eziphansi.
Ukuphathwa kokuqukethwe, izibalo kanye namathuluzi wokuxhumana njenge-WordPress, isipoki, i-mephisto, i-seo panel, i-socioboard, i-piwik, i-mautic, i-discourse, phakathi kokunye.
Akunandaba ukuthi ithuluzi elisetshenzisiwe yini, okubalulekile ukuqonda ukuthi amandla okwenza inzuzo enkampanini axhumene nokuphathwa kwezinqubo zayo, ikhwalithi yemikhiqizo yayo kanye nokwenza ngcono kwezinqubo zokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngokusetshenziswa okuphansi kwezinsiza.
Endabeni yami uqobo, ngivame ukusebenzisa amathuluzi afana ne-ERP Odoo angisiza ngithuthukise futhi ngilinganise izinqubo zamakhasimende ami, lokhu okokuqala kunginika ukulawula izindleko nemali engenayo yenkampani, kukhomba ukwehluleka kwenhlangano nenqubo inhlangano futhi ingivumela ukuba ngibone ngeso lengqondo amathuba okuthuthuka. Ngokuyinhloko ngigxila ekusebenziseni inqubo yokukhiqiza yenkampani (Imodyuli yokukhiqiza ka-Odoo ingisiza kakhulu kulo msebenzi), lapho-ke ngigxila ekwenzeni i-logistics inqubo yokwengeza inani elengeziwe kumkhiqizo futhi ingaqhubeki nokubonakala njengezindleko ku-supply chain, okokugcina kodwa ngakha izinqubomgomo ezanele zokuthuthukisa izindlela zethu zokuthengisa futhi ukuze ukuthengwa kokungenayo kusebenze kahle.
Konke lokhu akuwona umsebenzi okufanele ulandelwe kuleyo ncwadi, kepha kungukukhombisa okuqinisekisiwe ukuthi ukwenza ngcono izinqubo zethu zangaphakathi kungakhathalekile ukuthi singena kanjani kuzokongela inhlangano yethu imali ethe xaxa, elingana ngqo ne ukwenza inzuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayandisa kanjani inzuzo nge-software yamahhala